निधिको उम्मेदवारीले असर नगर्ने देउवाको निष्कर्ष « Naya Page
काठमाडौं, ८ असार । आसन्न १४औं महाधिवेशनमा सभापतिमा शेरबहादुर देउवा आफै अघि सरेको अवस्थामा उपसभापति विमलेन्द्र निधि सभापतिको उम्मेदवारमा टिकिरहन्छन् या छोड्छन् ? अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङले सबैजसो केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापति देउवालाई टिमबाट सहमति जुटाएर अघि बढ्न सुझाब दिएको बताइन् । ‘विमल दाइले पनि दाबी गर्नुभएको छ । उहाँको असन्तुष्टि के हो ? उहाँसँग पनि छलफल गर्नुस् र टिम मिलाएर अघि बढ्नुस् भनेका छौँ,’ उनले भनिन् । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले निधिले दुःखका वेला साथ दिएकाले उनलाई त्यसै छाडेर अघि बढ्न ठीक नहुने भन्दै मिलाएर अघि बढ्न सुझाब दिएका छन् ।
कतिपय नेताहरूले भने कोरोना र वर्षाका बीच महाधिवेशन गर्न सम्भव नहुने आग्रह गरेका थिए । पहाडी जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरूले सकेसम्म महाधिवेशन सार्नुपर्नेसमेत माग गरेका थिए । ‘एकातिर असार साउनको महिना छ, बाढीपहिरोको जोखिम छ । अर्काेतिर कोरोनाको महामारी कम भएको छैन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले पहाडी क्षेत्रका नेताहरूले भनेको सुनाउँदै भने, ‘त्यसैले मिलेसम्म महाधिवेशन स्थगित गरौँ ।’ संस्थापन समूहबाटै पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिमा दाबी गर्दै आइरहेका छन् । १३औँ महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएका श्रेष्ठ हाल संगठन विभागको प्रमुख छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट